Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Filipina » Niala tamin'ny politika ny filohan'i Filipina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • Vaovao farany mikasika ny Filipina • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Zava-dehibe ho an'i Duterte ny fananana mpandimby mahatoky hisolotena azy amin'ny mety ho hetsika ara-dalàna - ao an-trano na avy amin'ny Fitsarana ady heloka bevava iraisam-pirenena - noho ny famonoana olona an'arivony maro tamin'ny ady nataony tamin'ny zava-mahadomelina hatramin'ny 2016.
Nanambara ny filoha Filipina Rodrigo Duterte androany fa hisotro ronono amin'ny politika izy.
Mpitsikera sy manam-pahaizana politika maro any Filipina sy any ivelany no mijery ny fanambaran'i Duterte amin'ny fisalasalana.
Ireo mpandinika politika any Filipina sy any ivelany dia nilaza fa mety hisy fomba mazava handosanan'ny zanany vavy ny rahavaviny.
Tamin'ny hetsika tsy nampoizina izay nahatonga ny tombantombana fa nanadio ny làlana ho an'ny filoham-pirenena tantanan'ny zanany vavy izy, dia nanambara ny filohan'ny Filipina mampihetsi-po, Rodrigo Duterte fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana 2022, fa hiala amin'ny politika tanteraka.
Ny fanapahan-kevitr'i Duterte hivoaka ny hazakazaka dia afaka nanala ny lalana ho an'ny zanany vavy Sara Duterte-Carpio mba hirotsaka hofidiana ho an'ny laharana ambony indrindra ao amin'ny firenena.
76 taona Duterte, izay efa filohan'ny Filipina nanomboka ny taona 2016, dia tsy afaka mitady vanim-potoana hafa amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy, saingy mety hirotsaka hofidina ho filoha lefitry ny firenena amin'ny fifidianana amin'ny taona ho avy.
Na dia ny antoko PDP-Laban aza no nanendry an'i Duterte ho filoha lefitra, dia nanambara izy tamin'ny sabotsy fa tsy hirotsaka hofidina VP izy, ary nilaza fa ny fanapahan-kevitry ny vahoaka dia nanatontosa izany.
“Androany, manambara ny fisotroan-dronono amin'ny resaka politika aho,” hoy izy, niseho tao amin'ny ivon-toeran'ny Komisiona misahana ny fifidianana ao Manila renivohitra miaraka amin'ny loholona nahatoky ny loholona Christopher 'Bong' Go, izay nisoratra anarana ho kandidà filoha lefitra PDP-Laban.
“Ny fientanam-po… ny fahatsapan'ny filipiana dia ny tsy fahalalako olona ary fanitsakitsahana ny lalàm-panorenana hanodinkodinana ny lalàna, ny fanahin'ny lalàm-panorenana” io hirotsaka hofidina ho filoha lefitra io, hoy izy nanitrikitrika.
DuterteNy fanapahan-kevitr'izy ireo hivoaka amin'ny hazakazaka dia afaka nanala ny lalana ho an'ny zanany vavy Sara Duterte-Carpio mba hirotsaka hofidiana ho an'ny laharam-pahamehana eto amin'ny firenena.
Nilaza i Duterte-Carpio talohan'izay fa tsy hikatsaka ny ho filoham-pirenena izy satria nifanaraka tamin'ny rainy fa iray amin'izy ireo ihany no handray anjara amin'ny fifidianana nasionaly amin'ny 9 Mey 2022. Noho izany ny tsy fisian'i Duterte tamin'ny latsa-bato dia mamela azy hiditra izao ny hazakazaka.
Sendra izany, nisolo ny rainy ho ben'ny tanànan'i Davao City ilay 43 taona rehefa Duterte lasa filoham-pirenena Filipina dimy taona lasa izay. Izy koa dia filohan'ny tanàna teo anelanelan'ny 2010 sy 2013.